Baga Ayyaana Irreecha Birraa Bara 2015 Isin Gahe -
(Gadaa) — Akka amantii Waaqeffannaatti, Waaqni uumaa waa maraati. Uumama qoollo kana keessa jiraatu kanneen lubbu qabeeyyii fi maleeyyii ta’an hunda kan uumee fi tiksee kan jiraachisu Waaqa dha.
Yeroo Malkaa bu’an ykn Tulluu bahan, dubartoonni uffata aadaa uffachuun siiqqee fi irreecha qabatanii Mareehoo jechaa dura deemu,
Abbootii fi dargaggoonni duubarra dhiichisaa ykn jeekkaraa hordofu,
Bakka irreechaa yeroo gahan, Abbaan Malkaa, malkaan saaqamuu ibsa.
Faatii waliif baafatu, kunis nagaa fi araara waliif buusanii , garaa nagaa fi qulqullummaan waliin irreeffachuuf,
Jaarsoliin akka angafaa quxisuutti walduraa duuba eebbisu. Eebba kana keessa waan argataniif Waaqa galateeffachuun, nagaa, jaalala, tokkummaa fi badhaadhina kadhatu
Sirni irreeffannaa ni raawwata. Yeroo kanatti warri irreessa qabate hundi irreessa isaanii bishaan cuuphuun Waaqa kanaan isaan gahe galateeffachuun, bara dhufus akkasuma nagaan akka isaan gahu gaafatu
Dhibaayyuu fi daddarbaan ni raawwata. Dachee sanyii biqilchiteef, waan irratti horanii fi argatan irraa matadeebii kennuu jechuudha.
Maatiin daa’ima ammachiisan yoo jiraatan, abbaan malkaa akka sirna ammachiisaatti raawwata
Sirbaa fi wallisaan duubatti garagalu, dhangaa qabatanii dhaqan waliin dhamdhamu ykn bakka qophii addaatti walgahanii nyaatanii dhuguun sirbanii gammadu. Bara dhufu nagaan akka walitti deebi’aniif eebbaan raawwatu.
SAAMICHI MAQAA “ABO”
OVR interviews Oromo Community of Washington DC leaders
1 thought on “Baga Ayyaana Irreecha Birraa Bara 2015 Isin Gahe”
Bakkalcha Barii says:
“…Irreessi Aadaadha ; Amatiidhas..” ibsa gabaabaa, ifaa fi sirrii. Amantiin Waaqeffannaa ammallee mootummaa abbaa irree wayyaanee biratti beekamtii hin arganne. Maqaaf jira malee qabatamaatti hin jiru. Waaqeffattoonni qe’ee isaanii bakka jiraatan magaalaas ta’e baadiyyaatti bakka itti dhaqanii waaqeffatan hin qaban. Galma waaqeffannaa ijaarrachhuun hin eeyyamamuuf; yoo du’an bakka awwaalchaa hin qaban (bakki awwaalchaa amantii qoodamee waan jiruuf).Dhimmoota kana fakkaatan irratti Gumiin Waaqeffannaa kun irrattis hojjechuu qaba.